Vbookz, akhristaha maqalka ugu fiican ee iPad / iPhone / iPod - Geofumadas
Leisure / waxyi
Vbookz, waa codka ugu wanaagsan ee loogu talagalay iPad / iPhone / iPod
Juunyo, 2013 Leisure / waxyi
Codsiyada akhriska kor ku xusan waxay bedelayaan habka aan uga helno buugaag, shaki la'aan.
Gaar ahaan, waxaan marwalba jeclayd inaan ku dhadhamiyo muujinta iyo qoraallada buug dhab ah, joojinta iyo akhriska tartiib-tartiib ah si aan ugu dhawaaqo tiraabta wanaagsan. Laakiin marna iguma dhicin in safar loo baxo wax loo akhriyi karo.
Vbookz waa tan ugufiican ee aan helay, haddii aad leedahay nooc buugga oo dijitaal ah. Hadda waxaan faallo ka bixiyaa faa'iidooyinka:
Fursadaha codka lab iyo dhadig labaduba waxay u egyihiin dabiici oo maskaxdayda qarxisay. Marka laga soo tago luuqada Isbaanishka waxaa jira 15 luqadood oo kale (ma ahan turjumaan) oo ay ku jiraan Boortaqiis, Jarmal, Talyaani, Faransiis, Ingiriis Ingiriis iyo waliba Ingiriis Mareykan ah.
Markaas waxaad haysataa fursad aad ku bedesho xawaaraha akhriska ee shaqeeya weyn.
Marka aad akhrineysid, faahfaahin ka mid ah muraayada weyn ayaa sii socota, inkasta oo ay sidoo kale la dajin karo in lagu muujiyo jaalle.
Waa in lagu qanco in ay ilaalinayso hakadka markii la xidhayo arjiga, si aynaan u lumin halka aan u soconno. Waxaan xasuustaa inay Sodels la jirtay daciifnimadani, maxaa yeelay waxay ahayd inaad doorato waxa ku jira, ka dib nuqul oo aad bilowdo, markaa xulashada dukumintiga oo dhan wuxuu ka dhigayaa bilowga mid gaabis ah haddii aan qoraalka u bedelno maqalna ma jirin hab lagu xakameeyo hakadka.
Waa akhriste wanaagsan, ma aha oo kaliya codka.
Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu akhriyo maqal la'aan, markaa waa inaad isticmaashaa farahaaga si aad u dooratid cabbirka qoraalka iyo qoraalka ayaa la dejiyaa si loogu akhriyo hab dhaqan ahaan.
Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay inaad sameyso raadinta qoraalka, oo ay weheliso astaanta muraayada weyneynta. Qaabka font waa anti dyslexia ... xiiso leh.
Tani waa tan ugu fiican. Sodels wuxuu lahaa faa'iido daro oo u baahan eray ama nooc txt ah. In kasta oo la beddeli karo, xaalado badan waxay ahayd wax laga xumaado in la akhriyo lambarrada bogga, hoose ama cinwaanka. Vbookz wuxuu akhriyaa kaliya qoraalka, dabiici ahaan.
Haddii ay dhacdo in faylka ereyga ah, u beddesho pdf, oo si sahlan loo samayn karo Bogaga ama Ereyga.
Waxay taageertaa habka hurdada, markaa muhiim maahan in dalabka si gaar ah loo helo wuxuuna ku shaqeeyaa asalka. Waxay ka dhigan tahay inaan adeegsan karno codsiyo kale inta aan wax akhrinayno, ama la joojinayo annaga oo aan istaagin. Xitaa haddii maqal nooc kale oo ogeysiis ah la soo qaado, lama hakinayo; haddii aan dhaqaajino muusikada ama maqalka joogtada ah, way joogsataa.
Waxaad sidoo kale yeelan kartaa muusikada asalka ah inta aad wax akhrinaysid, sidaasna waxaad ku fulineysaa amarka mid ka mid ah lataliyayaashayda oo kugula taliyay muusigga jilicsan inuu noqdo daaweyn si looga gaaro faa'iido badan akhriska. Iyo faahfaahin xiiso leh, waa suurtagal in lala wadaago weedho Facebook.
Waan ku faraxsanahay safar laba maalmood ah, intii aan waday waxaan awooday inaan akhriyo dhammaan "Nolosha inaan u sheego" ee García Márquez. Waxaan xasuustaa inaan iibsaday buugga laakiin waligey si buuxda uma aqrin, hadda, waxaan soo degsaday pdf waana intaas ... aqriso si aad u socoto. In kasta oo hadda ay dareenkayga soo jiidatay inaan buugaag bilaash ah kala soo baxo maktabadda Gutemberg.
Nasiib darro in aysan taageerin qaababka DRMed ama ePub, taas oo ka dhigaysa wax aan macquul ahayn in la akhriyo faylasha Kindle, in kasta oo laga yaabo in goor dambe. Sidoo kale waxaa jira dhowr codsi oo kuu oggolaanaya inaad sameyso beddelaad.
Laga soo bilaabo halkan waxay awoodaan soo dejinta app.
Post Previous" Hore Buug loogu talagalay qiimeynta cadastral magaalooyinka
Post Next 3 news from SupergeoNext »
2 Jawaabo "Vbookz, akhristaha maqalka ugufiican ee iPad / iPhone / iPod"
Febraayo, 2018 at
Isbaanish ka yimid Spain
Alejandro isagu wuxuu leeyahay:
Lahjadu waa Isbaanish ka yimid Spain? Latino?